त्यो एसएलसी र यो एसईई - Pradesh Today त्यो एसएलसी र यो एसईई - Pradesh Today
चैत १३, २०७५ उमा भण्डारी
यतिबेला एसईई परीक्षा सञ्चालन भईरहेको छ । एसएलसीलाई परिमार्जन गरी बनेको एसईई परीक्षा संघीय संरचना अनुसार भन्दा केन्द्रिकृत प्रक्रियाबाट अहिलेसम्म सञ्चालन हुँदै आएको छ । यद्यपि यस वर्षको ब्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारले पाएको छ । दाङ ४४ वटा परीक्षा केन्द्रबाट ११ हजार ४ सय विद्यार्थीले एसईई परीक्षा दिईरहेका छन् ।
प्रदेशस्तरीय रुपमा सञ्चालन भईरहेको परीक्षाले अहिले सबै एसईई परीक्षा दिने विद्यार्थीहरुमा छुट्टै किसिमको वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ । तर विगतका दिनहरुमा जति एसएलसी परीक्षाको महŒव थिया, अहिले त्यति महŒव एसईई परीक्षालाई छैन । तर पनि विद्यार्थीहरुमा एकखालको हाउगुजी रहि नै रहेको छ । तर पनि परीक्षा प्रणाली र मानसिकता भने एसएलसी सरह नै देखिन्छ ।
जिल्लाका शिक्षा सरोकारवालाहरुले भने ढुक्क भएर अन्य कक्षाको जस्तै परीक्षा दिन परीक्षार्थीहरुलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । एसईई परीक्षाको सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुसँग प्रदेश टुडेको नियमित साप्ताहिक स्तम्भ टुडे राउण्ड टेबलमा धारणा लिएका छौं ।
विद्यार्थीहरुमा डर त्रास छैन
जिल्ला शिक्षा विकास
तथा समन्वय इकाई, दाङ
जिल्लामा अहिले एसईई परीक्षा एकदमै मर्यादित तरिकाले सञ्चालन भईरहेको छ । विद्यार्थीहरुको अनुशासन, मर्यादिन भएर परीक्षा दिइरहेका छन् । परम्परागत सोंचसँग एसईई परीक्षा जोडिएको छ । तर यसका कारण विद्यार्थीहरु डराउने, परीक्षादेखि क्रसित हुनेजस्तो वातावरण दाङमा देखिएको छैन ।
पहिलेको एसएलसी परम्परागत रुपमा सञ्चालन हुने भएकाले अभिभावकहरु डराउनु स्वभाविक हो । किनभने अझै पनि त्यो मानसकिता परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
पहिले कक्षा १० परीक्षा भनेपछि सबैलाई गोल्डेन गेट जसरी पनि पास गर्नु पर्दछ । यो सबैभन्दा खतरा अवस्था हो भन्ने डर र मानसिकता भएका कारण सबै यस परीक्षादेखि डराउने गर्दथे । तर अहिले यस पछाडि पनि विभिन्न तहहरुमा पठनपाठन भई नै रहेको छ ।
तर यो पढाइको एउटा खुड्किलो हो । तर अन्य परीक्षाजस्तै सामान्य तरिकाले विद्यार्थीहरुले परीक्षा दिनुपर्दछ । भयावह यसमा केही छैन । पढेका कुरा नै परीक्षामा आउने हुन । किताबमा आधारित रहेर प्रश्नपत्र बनाइने भएकाले यसमा त्यस्तो डराउनु पर्ने, अप्ठ्यारो मान्ने केही छैन र विद्यार्थीरुमा त्यस्तो वातावरण पनि मैले देखिन ।
माध्यमिक शिक्षा परिषदले कक्षा १२ लाई एसएलसीको मान्यता दिएको भए पनि अहिलेसम्म शिक्षाका ऐन नियमहरु पुरानै लागू भइरहेका छन् । जसले गर्दा एसएलसी हटाए पनि कतिपय अवस्थामा कक्षा १० उत्तीर्ण प्रमाण–पत्रहरु काम लाग्ने गर्दछ ।
न्यूनतम योग्यता कक्षा १० पास भनेर अझै पनि कुनै संघसंस्था तथा कुनै कार्यालयमा समेत यसलाई स्थान दिने गरेकाले पनि यसलाई एसईईको रुपमा सञ्चालन गरिएको हो जस्तो लाग्छ । जबसम्म नयाँ शिक्षा ऐन नियमहरु लागू हुँदैन तबसम्म एसईई परीक्षाको मानसकितामा परिवर्तन आउन सक्दैन ।
तर पनि परीक्षा मर्याादित, अनुशासित र व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन भईरहेको छ । जति पनि अनुगमनमा म गए सबै विद्यार्थीहरुमा डर त्रास भेटिन । परीक्षा जिल्लामा एकदमै राम्रो भइरहेको छ ।
पढाइमा विद्यार्थीको रूचि छैन
नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव तथा अध्यक्ष
पहिलेका एसएलसी परीक्षा दिने विद्यार्थीहरुमा पढ्नु पर्छ भन्ने धारणा हुन्थ्यो । अहिले त्यो कोहि विद्यार्थीहरुमा देखिददैन । अहिले त विद्यार्थीहरुमा चिट कसरी चोर्नु पर्छ ? कसले सिकाइ दिन्छ ? भन्ने चिन्ता धेरै हुन्छ ।
आफै मेहनत गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता हराएर गयो । अहिले अधिकांश विद्यार्थीहरु पढ्नेभन्दा पनि अरुको भरमा परीक्षा दिने प्रचलन बढिरहेको छ । यसको प्रमुख कारण परीक्षा प्रणाली प्रभावकारी नहुनु हो ।
पहिले अनुगमन गर्न जाँदा शिक्षकहरु थाहा नै नदिई अनुगमन गर्दै कक्षामा बस्ने निरीक्षकहरु पनि कुनै एकजना मात्र बस्ने, आपतकालिन तथा बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र अर्को फेरिने हुन्थ्यो । तर अहिले अनुगमनसमेत खस्किएको छ ।
एउटै कक्षामा दुई÷तीनजना जाने, यस्तै परे परीक्षा हलमा एकआपसमा गफ गर्ने, फोटो खिच्नेजस्ता गतिविधिहरु भइरहेका छन् । जसले विद्यार्थीहरुको ध्यान भङ्ग गर्ने, शान्त वातावरणमा परीक्षा दिन नपाउने जस्ता समस्याहरु पनि निम्तिरहेका छन् । जसले गर्दा अहिले एसईई परीक्षा नै लाजमर्दो भएको छ ।
अहिले कुनै पनि परीक्षाहरु अनुशासित तरिकाले सञ्चालन भएको पाइदैन । पछिल्लो समयमा अक्षराङ्क प्रणाली ल्याइयो । यसले विद्यार्थीहरुमा झन प्रभाव पा¥यो । फेल भईदैन, किन पढ्नु प¥यो, नपढेर नै पास भईन्छ ?
भन्ने नकारात्मक प्रभाव परेको छ । पहिले त पढ्नु पर्ने हुन्छ भन्ने डर र वातावरण परिवार र विद्यालयमा थियो त्यो छैन । जसरी भए पनि एसईई उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पाउनुपर्दछ भन्ने मानसिकता विद्यार्थीहरुमा विकास भएको छ भने शिक्षकहरुले आफ्ना विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई कसरी पास गराई शतप्रतिशसत विद्यार्थी पास गराउनु पर्दछ भन्ने मानसिकता रहि आएको छ ।
यदि नयाँ प्रणाली ल्याउनु पर्दछ भन्ने लाग्छ भने पहिले विद्यार्थी र शिक्षकहरुको मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्दछ । विद्यालय तथा परिवारमा उपलव्ध हुने वातावरण पढने किसिमको हुनुप¥यो । सिकाइ परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।
यस्तै कुन विद्यार्थीको अवस्था कस्तो छ ? भनी मासिक रुपमा विद्यार्थीहरुको विवरण बनाई उनीहरुको स्तर अनुसार पठनपाठन गर्नुप¥यो अनि मात्र केही परिवर्नत होला होइन भने त्यस्तै हो ।
डरलाग्दो परीक्षाको रुपमा लिन आवश्यक छैन
पहिले एसएलसी परीक्षालाई सबैले एकदमै ठूलो परीक्षाको रुपमा लिने गर्दथे । त्यहि मानसिकता अहिले पनि देखिन्छ । तर यसलाई डरलाग्दो रुपमा लिनु पर्ने केही छैन । यो पनि सामान्य परीक्षा नै हो ।
कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्मको अवधिसम्म अध्ययन गर्दा विद्यार्थीहरुले कसरी पढे ? कति प्रतिशत ल्याए ? भन्ने कुरालाई आन्तरिक रुपमा विद्यालयमा नै गराउने गरिथ्यो । तर कक्षा १० को पहिले परीक्षा राष्ट्रियस्तरबाट हुने गरेकाले सबैले यसलाई अलि डरको रुपमा लिएका हुन् र त्यसको प्रभाव अहिले पनि छ ।
तर अहिले एसईई परीक्षा सामान्य भईसकेको छ । माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले १२ कक्षाको परीक्षालाई पुरानो एसएलसीको रुपमा लिने गरेको भए पनि एसईई पनि उत्तिकै महङ्खव छ । मार्कसिटमा पास फेल लेखिदैन ।
तर ग्रेडसिटमार्फत उनीहरुको स्तर त थाहा हुन्छ । फेरी एसईई उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र कहिकतै काम लाग्दैन भन्ने छैन । सामान्य खरिदारको जागिर खानका लागि अहिले पनि कक्षा १० उत्तीर्ण गरेको योग्यता त काम लाग्छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै एसईईलाई सबैले महङ्खव दिइएको हो ।
पहिले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय स्तरबाट परीक्षा सञ्चालन गर्दथ्यो भने अहिले प्रदेशस्तरीय रुपमा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भइरहेको छ । यसलाई सबैले बुझ्नुपर्दछ । पहिले माध्यमिक तहको शिक्षा ऐन तथा कानुन फरक थियो त्यसैले कक्षा १० र कक्षा १२ परीक्षालाई फरक–फरक तरिकाले लिईन्थ्यो । यो परीक्षा पहिलेदेखि चलेको परम्परा हो यो विस्तारै हट्दै जान्छ ।
तर यसलाई कुनै डरलाग्दो परीक्षाको रुपमा लिन आवश्यक छैन । अहिले यो सामान्य भईसक्यो । तर यस परीक्षाको मान्यता र प्रमाण–पत्रको महङ्खव र मान्यता अझै पनि भएकाले यसलाई सञ्चालन गरिएको हो ।
परीक्षाको गुणस्तर खस्किदै
अहिलेको समयमा एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्नु कुनै अर्थ छैन । किनभने विगतका वर्षहरुमा सञ्चालन हुने एसएलसी परीक्षा र अहिलेको एसईई परीक्षामा निकै भिन्नता आएको छ । विद्यार्थीहरुमा पढ्नुपर्छ भन्ने धारणा हराउँदै जानाले अहिले यसको गुणस्तरियता खस्किदै गएको छ ।
पहिलेको पढाइ सांस्कृतिक, परम्परागत र पूर्वि दर्शनसँग जोडिएको हुन्थ्यो । जसका कारण विद्यार्थीहरुले मेहनत गर्नुपर्दछ, लगनशील भएर पढ्ने हो भने मात्र पास भइन्छ भन्ने धारणा थियो ।
जसका कारण कक्षा १० को परीक्षा सबैलाई अत्यन्त महङ्खव र ठूलो परीक्षा लाग्ने गर्दथ्यो । तर अहिले कसरी पास हुने ? भन्ने प्रवृत्ति चलिरहेको छ । विद्यार्थी र शिक्षकहरु बीच पढ्ने पढाउने मेहनतको कमी हुँदै आएको छ ।
विद्यार्थीहरुको अध्ययन गर्ने बानीमा हराउँदै जान थाल्यो । जसका कारण परीक्षामा सहयोगीको भरपर्ने, चिट चोर्ने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ । अहिले कक्षा १० को परीक्षालाई एसएलसी परीक्षाजस्तो महङ्खव नदिए पनि सोंच र परम्परा भने हराएको छैन ।
त्यसैगरी परीक्षा हलसम्म बाबु आमा, नातेदारले पु¥याउन जाने, परीक्षा चलिरहेका समयमा आफन्त हो भनी सहज वातावरण दिलाउन खोज्ने, परीक्षा हल नजिकै चिटका पाना भेटिने, कसरी आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई परीक्षामा पास गराउने ? भन्ने मानसिकताका कारण अहिलेको परीक्षा प्रणाली ठेट छैन ।
विद्यार्थीहरुमा मेहनत गरेर पढ्नु पर्छ, स्वविवेकले परीक्षा दिनुपर्दछ भन्ने धारणा अहिले शुन्य हुँदै गएको छ । जसका कारण परीक्षामा विद्यार्थीहरुको मौलिकपनामा ह्रास आएको छ ।
ससाना कुराहरुलाई कसरी व्याख्या गर्ने ? कसरी अर्थ लगाउने ? भन्नेसम्म सामान्य पनि ज्ञान छैन । यसले कसरी एसईई परीक्षाको औचित्य हुन्छ ? अहिले त झन यो ग्रेडिङ प्रणाली आयो जसले विद्यार्थीहरुलाई परीक्षामा फेल भईन्छ, त्यसैले पढ्नु पर्दछ । मेहनत गर्नु पर्दछ भन्ने मानसिकतालाई शुन्य बनाईदिएको छ ।
यसका लागि सरकारले परीक्षा प्रणाली र शिक्षा नीतिलाई व्यवहारिक बनाउन सकेमात्र यसको अर्थ छ । होइन भने एसईई सञ्चालन गर्नुको कुनै औचित्य छैन । यसको गुणस्तरीयता झन खस्किदै जान्छ ।
पछिल्लो समय एसईई दिएर पास भएका विद्यार्थीहरु अन्यत्र संघसंस्थामा पढ्न जाँदा सामान्य प्रश्नको उत्तरसमेत दिन नसक्ने अवस्था बढिरहेको छ । यसले विद्यार्थी र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई प्रत्यक्ष मापन गर्दछ । अनि खोई एसईई परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरुको उपलव्धि ? कि कक्षा १० लाई मान्यता दिनुप¥यो ? कि त १२ कक्षालाई महत्व दिनुप¥यो ?
जबसम्म नयाँ शिक्षा ऐन नियमहरु लागू हुँदैन तबसम्म एसईई परीक्षाको मानसकितामा परिवर्तन आउन सक्दैन ।नेपालमा अहिले एसईई परीक्षालाई विदेशी ट्रायलको रुपमा लिईएको छ । जबसम्म नेपालको परीक्षा प्रणाली आफ्नो विवेकले सञ्चालन हुँदैन । तबसम्म यसले प्रभावकारिता पाउँदैन ।
ससाना कुराहरुलाई कसरी व्याख्या गर्ने ? कसरी अर्थ लगाउने ? भन्नेसम्म सामान्य पनि ज्ञान छैन । यसले कसरी एसईई परीक्षाको औचित्य हुन्छ ? अहिले त झन यो ग्रेडिङ प्रणाली आयो जसले विद्यार्थीहरुलाई परीक्षामा फेल भईन्छ, त्यसैले पढ्नु पर्दछ, मेहनत गर्नु पर्दछ भन्ने मानसिकतालाई शुन्य बनाईदिएको छ ।
परीक्षाको महत्व घट्दै
नेपाल शिक्षक संघीय कार्यसमिति
वास्तवमा भन्ने हो भने एसईई परीक्षा अरु कक्षाको परीक्षा जस्तै हो । विद्यालयले आन्तरिक रुपमा सञ्चालन गर्ने परीक्षा भन्दा कुनै फरक छैन । जब माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले कक्षा १२ लाई एसएलसीको मान्यता दिएपछि यसलाई तामझाम गरी खर्च गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छैन ।
पहिले केन्द्रबाट परीक्षा सञ्चालन हुन्थ्यो भने अहिले प्रदेशस्तरीय रुपमा परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा एसईई ग्रेडिङ प्रणालीमा आईसकेपछि यसको महङ्खव अझ घटेको छ । यसरी यो परीक्षालाई केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, सुरक्षा गार्डको व्यवस्था, प्रहरी परिचालन, निरीक्षकहरुको व्यवस्था गरी अनावश्यक खर्च गर्नुपर्ने मलाई लाग्दैन र त्यो आवश्यक पनि छैन ।
पछिल्लो समय एसईई दिएर पास भएका विद्यार्थीहरु अन्यत्र संघसंस्थामा पढ्न जाँदा सामान्य प्रश्नको उत्तरसमेत दिन नसक्ने अवस्था बढिरहेको छ । यसले विद्यार्थी र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई प्रत्यक्ष मापन गर्दछ ।
अनि खोई एसईई परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरुको उपलव्धि ? कि कक्षा १० लाई मान्यता दिनुप¥यो ? कि त १२ कक्षालाई महङ्खव दिनुप¥यो ? सामान्य स्थानमा गएर पनि आफूले जानेका कुराहरुलाई प्रस्तुत गर्न नसक्दैनन् आजका विद्यार्थीहरु ?
अझ अहिले ग्रेडिङ प्रणाली लागू भईसकेपछि विद्यार्थीहरुमा आफ्नो विवेकले पढ्नु पर्दछ भन्ने मानसिकता हराएर गईसक्यो । परम्परागत तरिकाले परीक्षालाई देखेर डर मान्ने प्रचलन भएपनि यसको गुणस्तरता भने एकदमै खस्किएको छ ।
नेपालमा अहिले एसईई परीक्षालाई विदेशी ट्रायलको रुपमा लिईएको छ । जबसम्म नेपालको परीक्षा प्रणाली आफ्नो विवेकले सञ्चालन हुँदैन । तबसम्म यसले प्रभावकारिता पाउँदैन । अहिले हेर्ने हो भने ५० प्रतिशत विद्यार्थीहरु चोरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले हुर्किएका छन् ।
जसले गर्दा मेहनत गरेर पढ्नु पर्छ, आफ्नो विवेकले परीक्षा दिनुपर्दछ भन्ने छैन । त्यसर्थ यो परीक्षालाई यसरी खर्च गरेर परीक्षा गराउनुको कुनै अर्थ छैन ? यो परीक्षाभन्दा कक्षा १ देखि ९ सम्मको परीक्षा एकदमै राम्रो छ ।